Vaovao - [Torohevitra momba ny famatsiana solika] Hafa mihitsy ny fanjifana solika amin'ny excavator, lehibe tokoa ny elanelana misy eo amin'ireo mpamily vaovao sy taloha?
[Torohevitra momba ny famatsiana solika] Hafa mihitsy ny fanjifana solika amin'ny excavator, lehibe tokoa ny elanelana misy eo amin'ireo mpamily vaovao sy taloha?
Ny mahasamihafa ny novice sy ny mpamily taloha dia tsy amin'ny teknolojia ihany fa amin'ny antsipirihany isan'andro…
Rehefa miatrika toe-javatra iasana isan-karazany dia afaka mifehy mora foana amin'ny traikefa ananany ireo mpamily tranainy mba hitadiavana ny fivelaran'ny asa, ary tsara kokoa noho ny mpamily vao manomboka amin'ny fitsitsiana solika sy tsy misy ahiahy izy ireo.
Noho izany, inona no mahasamihafa ny mpamily novice sy ilay mpamily taloha miasa ao amin'ny excavator?
Ahenao kely ny fihoaran'ny excavator
Amin'ny fandidiana tena izy dia ho hitantsika fa satria misokatra ny valizy azo antoka ao amin'ny faritry ny hydraulic, raha vao miseho ny onjampeo, na dia ampitomboinao aza ny throttle dia tsy hitombo ny herin'ny excavator mandritra ny fandidiana tena izy, ary tsy hijanona intsony ilay tompony manitsaka eo. , Raha manohy manitsaka ianao dia ho very menaka betsaka.
Safidio ny toerana misy ny asa
Ireo mpamily veteranina efa za-draharaha dia hisafidy toerana sahaza azy rehefa miditra amin'ilay toerana, tsy toy ny olona vao niditra an-toerana fa tsy nisafidy. Hisafidy haavo mitovy amin'ny an'ny fiara fitaterana entana izy ireo hampihena ny haavon'ny excavator mandritra ny fandidiana, hanafohezana ny halaviran'ny fandidiana, ary hisorohana ny fako amin'ny solika.
Mazava ho azy, be ny antsipiriany kely momba ny fitsitsiana solika. Raha mbola manamafy ny fianaranao isan'andro ianao ary mamintina ireo toro-hevitra momba ny fitsitsiana solika anao any am-piasana, mino aho fa tsy ho ela ianao dia ho mpamily taloha ary tsy misy ahiahy intsony!